रिसालु श्रीमतीलाई कसरी सम्हाल्ने ? - Samudrapari.com
विवाहपछि श्रीमान श्रीमतीबीच झै–झगडा हुनु सामान्य हो । तर, यदि श्रीमती नै धेरै रिसालु परेमा के गर्नुहुन्छ ? आउनुहोस् जानौं रिसालु श्रीमतीलाई सम्हाल्ने तरिका ।
श्रीमतीको पग्लिने बिन्दु पत्ता लगाउनुहोस् : सबै व्यक्ति कुनै न कुनै बिन्दुमा आफ्ना भावनाहरुसँगै पग्लन्छन् । अर्थात् उनीहरु त्यस बिन्दुमा नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
आफ्नी श्रीमतीको पनि यस्तो बिन्दु पत्ता लगाउनुहोस् । यदि तपाईं स्वयंले उसलाई रिस उठ्ने काम गर्नुभएको छ भने पहिला उसलाई तपाईंमाथि रिस पोख्न दिनुहोस् । त्यसपछि तुरुन्तै दुखी बनेर माफी माग्नुहोस् । तपाईं दुखी बनेको तपाईंको अनुहारमा भने प्रष्ट झल्किनुपर्छ ।
तर्क नगर्नुहोस् : यदि उनी तपाईंसँग क्रोधित् छिन् भने उनी कुनै पनि हालतमा तपाईंको कुरा सुन्न तयार छैनन् । त्यस कारण यस्तो अवस्थामा आफूलाई बचाउनुको साटो उनीमाथि ध्यान दिनुहोस् । पहिला उनलाई सबै कुरा भन्नदिनुहोस् ।
जब उनी शान्त हुन्छिन् त्यसपछि बल्ल आफ्नो कुरा राख्नुहोस् । व्यक्ति रिसाएको बेलामा आफ्नो कुरा राख्नु बेकार हो । अर्को, कुरा उनी बोलिरहेको बेलामा शान्त हुन आग्रह पनि नगर्नुहा्ेस् किनभने यस्तो गर्नाले रिसाएको व्यक्तिलाई झनै उत्तेजित बनाउँछ ।
आत्मसमर्पण गर्नुहाेस् : चुपचाप बस्नु या बहस गर्नुको साटो कहिलेकाहीं आत्म समर्पण गर्नु पनि सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प हुन सक्छ । यसको लागि आफ्नो शारीरिक हाउभाउबाट पनि श्रीमतीसँग सहमत भएको जनाउन सकिन्छ । टाउको हल्लाउने र ढिलो श्वास छोड्नाले पनि तपाईंले उनको कुरामा आत्मसमर्पण गरेको जनाउदिन सक्छ ।
श्रीमतीले रिसमा भनेका कुरालाई नराम्ररी नलिनुहोस् : महिलाहरु प्राय:चाँडो रिसाउँछन् । रिसमा तपाईंलाई चोट पुग्ने किसिमका कुराहरु पनि भन्न सक्छन् । तर, रिसमा बोलिएको हुँदा तपाईंले भने त्यसलाई व्यक्तिगत रुपमा नलिदाँ नै राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०९, २०७९
प्रकाशित समय: २३:३६:४५